पत्र टेम्पलेट तपाइँको payslip प्राप्त गर्न अनुरोध गर्न
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 18, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
तपाईंको payslip तपाईं आफ्नो आय औचित्य गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईको प्रशासनिक जीवनको लागि अपरिहार्य, यो कागजात धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाइँ तपाइँ काम गर्नुभयो वर्ष को संख्या प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ। यो जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ कि तपाईंलाई अधिकार दिइएको प्रत्येक चीज तपाईंलाई भुक्तान गरिएको छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो कि तपाईंले जीवनको लागि राख्नै पर्छ। यसलाई हराउनु वा नपार्नुमा गम्भीर परिणामहरू हुन सक्छन्। तपाईंले अवश्य गर्नुपर्दछ, यदि यो समयमै तपाईंसम्म पुग्न सकेन भने, तुरून्त प्रतिक्रिया गर्नुहोस् र यसलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेर माग गर्नुहोस्।
एक payslip के हो?
तपाईं र तपाईंको नियोक्ता सामान्यतया औपचारिक रोजगार सम्झौता द्वारा बाध्य छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई दैनिक आधारमा उपलब्ध गराउनुभएको कामको बदलामा भुक्तान गरिन्छ। कानूनको साथ पालना गर्दा, तपाईले तलब अन्तरालमा तपाईको तलब पाउनुहुन्छ। सामान्यतया तपाइँ मासिक आधारमा भुक्तानी गर्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको सुरू वा अन्ततिर।
Payslip विस्तार मा निर्दिष्ट गर्दछ यस अवधि को लागी तपाइँलाई भुक्तान सबै रकमहरु। लेबर कोडको लेख R3243-1 अनुसार, बुलेटिनमा तपाइँको काम गरेको घण्टा, तपाइँको ओभरटाइम, तपाइँको अनुपस्थिति, तपाइँको भुक्तानी बिदा, तपाइँको बोनस, प्रकारको ब्यक्ति हुनु पर्छ ...
यसलाई प्राप्त गर्नका लागि कुन ढाँचामा?
हालको डिजिटलाइजेशनका कारण फ्रान्सका कम्पनीहरूमा payslip को डिमटेरियलाइसन सामान्य भएको छ। यो मानक अब फ्रान्स मा स्थापित छ। यसैले सम्भव छ कि यस बुलेटिनको सम्पादन गरिएको संस्करण वा कम्प्युटर ट्रान्सक्रिप्शन।
लेबर कोडको लेख L3243-2 अनुसार, कर्मचारीसँग यस प्रणालीको विरोध गर्ने अधिकार छ र कागजको ढाँचामा आफ्नो पेस्लिप प्राप्त गर्न जारी राख्नको लागि छनौट गर्न सक्दछ।
रिड विनम्र अभिव्यक्ति एक पेशेवर इमेल मा बच्न को लागी
तपाईंले यो पनि जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको रोजगारदाता yer .० यूरो जरिवानाको अधीनमा छ यदि उसले तपाईंलाई तपाईंको भुक्तानी पठाउँदैन भने। यो राशि सबमिट गरिएको प्रत्येक फाइलको लागि प्रदान गरिएको छ। तपाइँ पनि एक payslip को जारी को कारण क्षति र ब्याज बाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा जब कर्मचारीले बेरोजगार सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्षम भएको छैन वा बैंक loanण अस्वीकार गरिएको छ। कसैले कल्पना गर्न सक्छ कि ऊ आफैं दुःखी छ र उसले आफ्नो मुद्दा अदालतमा हाल्ने निर्णय गर्दछ।
कसरी तपाईंको payslip प्राप्त गर्ने?
सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाईको कम्पनीमा सम्बन्धित विभागलाई लिखित अनुरोध पठाउनु हो। यहाँ दुई नमूना पत्रहरू छन् जुन तपाईं भर पर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो उदाहरण: एक Undelivered वेतन पर्ची को लागी टेम्पलेट
टेलिफोन: 06 66 66 66 66
[शहर] मा, [मिति
विषय: भुक्तान पर्चीको लागि अनुरोध
मैले वर्तमानमा अनुभव गरिरहेको समस्यामा तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्न मैले तपाईंलाई लेख्नुपर्दछ।
मेरो प्रबन्धकलाई धेरै मौखिक अनुस्मारकहरूको बाबजुद पनि, म अझै गत महिनाको लागि मेरो payslip प्राप्त गरेको छैन।
यो निश्चित रूपमा उसको तर्फबाट दोहोरिएको निरीक्षण हो, तर केहि प्रशासकीय प्रक्रियाहरूको पूर्णताको लागि। यो कागजात मेरो लागि आवश्यक छ र यो ढिलाइले मलाई महत्वपूर्ण क्षति निम्त्याउँछ।
यसैले मैले तपाईंलाई तपाईंको सेवाहरू मार्फत तपाईंको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अनुरोध गर्न अनुमति दिएको छु।
मेरो हार्दिक धन्यवादको साथ, कृपया म्याडम, मलाई अति अभिवादन छ।
रिड टेम्प्लेट इमेलबाट एक पर्यवेक्षकबाट जानकारीको लागि अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिन
तपाइँको payslips को घाटा को मामला मा फरक समाधान
एउटा प्रतिलिपि अनुरोध गर्नुहोस्। यो तपाइँको payslips को नयाँ प्रति प्राप्त गर्न को लागी सब भन्दा सजिलो र छिटो तरीका हो। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको तपाईको रोजगारदातालाई सम्पर्क गर्नु भनेको तपाईलाई उक्त कागजातको प्रतिलिपि जारी गर्न भन्नुहोस्। कर्मचारी प्रशासन विभाग तपाईले हराउनु भएको नक्कल प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
जहाँसम्म, तपाईंलाई यो पनि जान्नुपर्दछ कि कुनै कानूनले तपाईंको रोजगारदातालाई यी कागजातहरूको नक्कल उत्पादन गर्न बाध्य गर्दैन। यो श्रम कोड मा लेखिएको छैन। यस उद्देश्यका लागि, उसले तपाईंको अनुरोध अस्वीकार गर्न सक्दछ। र यो लेख एल 3243-4 ले पनि तपाइँको नियोक्तालाई न्यूनतम years बर्षको लागि तपाइँको payslip को एक प्रतिलिपि राख्न बाध्य गर्दछ। तसर्थ, तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईं आफ्नो मेलमा सही टोन प्रयोग गर्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई डुप्लिकेटहरू अनुरोध गर्नु आवश्यक छ।
दोस्रो उदाहरण: नक्कल अनुरोध को लागी टेम्पलेट
[शहर] मा, [मिति]
विषय: हराएको payslips को लागी अनुरोध
मेरो कागजातहरू पछि भर्खरै। मैले याद गरे कि म धेरै payslips हराइरहेको थियो। मलाई लाग्छ कि मैले उनीहरूलाई एक प्रक्रियाको क्रममा हराएको छु जुन मैले हालसालै सामाजिक सेवाहरूसँगै गर्नुपर्ने थियो।
यो कागजात विगतमा मेरो लागि उपयोगी भएको थियो र अझै अधिक हुनेछ जब समय आउँदछ मेरो पेंशन अधिकारहरू जोड्न।
यसैले म तपाईंलाई आफुलाई थाहा दिन यहाँ लेख्न को लागी अनुमति दिन्छ, यदि सम्भव छ भने, तपाईका सेवाहरूले मलाई डुप्लिकेटहरू प्रदान गर्न सक्दछन्। यी महिनाहरूका लागि [महिना] देखि [महिना] हालको बर्षको लागि भुक्तानहरू हुन्। ।
यो धेरै कृतज्ञताका साथ हो कि मँ तपाईलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु, महोदया, मेरो आदरणीय अभिवादन।
अरू कुन समर्थन कागजातहरू म प्रयोग गर्न सक्छु?
जबसम्म तपाईंको कम्पनीले तपाईंलाई प्रतिलिपि (हरू) डेलिभर गर्दैन, तपाईं जहिले पनि तपाईंले काम गरेको अवधिमा प्रमाणित प्रमाणपत्रको लागि माग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तलब प्रमाणपत्र शर्तमा वैध छ कानूनी र प्रशासनिक। कार्य प्रमाणपत्रले चाल पनि गर्न सक्दछ।
रिड कसरी एक पेशेवर पाठ को सही प्रूफरीड गर्ने?
यदि कहिल्यै, यी माध्यमहरूमा, तपाईं अझै पिन आफ्नो तलब को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, समाधान तपाईंको बैंक संग पाउन सकिन्छ। तपाईंको बैंक कथनहरू तपाइँको रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्नुभएको स्थानान्तरणको विवरण गर्दछ। तपाईं यी खाताहरू प्रबन्धकबाट यी रेकर्डहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले लिखित अनुरोध द्वारा अनुरोध शुरु गर्नु पर्छ। यो सेवा प्राय: भुक्तानी गरिन्छ।
डाउनलोड गर्नुहोस् "प्रथम उदाहरण-टेम्प्लेट-को लागि भुक्तान पर्ची डेलिभर छैन। docx"	प्रिमियर-उदाहरण-मोडल-डालो-स्लिप-गैर-डेलिभर। डॉक्स - २ 4214 पटक डाउनलोड गरियो - १ K Kb
डाउनलोड गर्नुहोस् "एक-डुप्लिकेट-अनुरोध.डॉक्स" को लागी दोस्रो उदाहरण मॉडल।	दोस्रो-उदाहरण-मॉडल-डालो-अन-डिमांडे-डे-डुप्लीका.डॉक्स - २ times पटक डाउनलोड गरियो - १ K Kb
पत्र टेम्पलेट तपाइँको payslip प्राप्त गर्न अनुरोध गर्न जनवरी 8th, 2022Tranquillus
अघिल्लोउनीहरूको सामूहिक सम्झौताको आधारमा दीर्घकालीन आंशिक गतिविधि प्रयोग गर्नुहोस्
निम्नपत्र टेम्प्लेट तपाइँको भुक्तानी गरिएको ज्याला भुक्तानी दाबी गर्न
गतिविधि रिपोर्ट, तपाईंको उपकरणको प्रचार गर्नको लागि आवश्यक उपकरण।